I-Barra Vieja Acapulco Beach House
4 recent guests complimented Francisco for outstanding hospitality.
Indlu enhle enombono okhethekile we-Barra Vieja nokufinyelela okuqondile olwandle, le ndlu yasebhishi iyindawo ekahle yokuphumula nomndeni wakho noma abangani ezindaweni ezivulekile nezinethezekile ezizokwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Itholakala nje imizuzu eyi-15 ukusuka e-Blvd. de las Naciones kanye nezindawo ezithokozisayo ezahlukahlukene njengezindawo zokudlela namakilabhu, futhi inengadi nechibi langasese lapho uzojabulela khona ukushona kwelanga okuhle kakhulu.
Jabulisa izinzwa zakho ngale ndlu yesitayela saseMexico, etholakala kumamitha ambalwa ukusuka olwandle lwaseBarra Vieja. Inezikhala ezivulekile nezinethezekile ezizokwenza ukuhlala kwakho kube yinto ekhumbulekayo.
4.74(53 okushiwo abanye)
4.74 out of 5 stars from 53 reviews
4.74 · 53 okushiwo abanye
Indawo yayo eyingqayizivele, kude nesiphithiphithi sedolobha, imema ukuhlangana kwangaphakathi kwezivakashi. Ungakwazi ukushiswa yilanga onqenqemeni lwechibi, ujabulele imisindo yezilwane zendawo (izinyoni) futhi uncoma ubukhulu boLwandlekazi iPacific.
Siyohlale sikubheke kunoma yisiphi isimo ongase ube naso. Kungakhathaliseki ukuthi banombuzo, inkinga noma bafuna isincomo sokuthi benzeni noma badle ini. Ungahlala ukhuluma nathi futhi sizokusekela ngentokozo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$941.